FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B Iimpawu zomlilo ezingxamisekileyo izibane / dyD-B izibane ezingenakuqhushumba
1. Isetyenziswe ngokubanzi kwi-oyile, ukucocwa kwe-oyile, imboni yeekhemikhali, umkhosi kunye nezinye iindawo ezinobungozi, njengesibonakaliso sokuphuma ngokukhuselekileyo, imiyalelo yokukhutshwa kokusetyenziswa;
6. Ifanelekile kwindawo yokushisa ephantsi ngaphezu kwe -40.
1. Igobolondo le-aluminiyam ye-alloy-casting, umphezulu we-high-pressure electrostatic spray.
2. Ulungelelwaniso lobomi obude bokukhanya okuphezulu komthombo wokukhanya kwe-LED, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukukhanya okuphezulu, ukuhlangabezana ngokufanelekileyo nokugcinwa kwamandla, iimfuno zokusingqongileyo.
3. Ipakethi yebhetri ye-Ni-MH eyakhelwe-ngaphakathi, umsebenzi oqhelekileyo wokutshaja ngokuzenzekelayo, ukungaphumeleli kombane kunokuba ngumbane ophuthumayo we-90 imizuzu.
4. Ngoyilo olukhethekileyo lwesekethe ekhuselekileyo ye-intrinsically, ukukhuselwa kwe-overcharge, ukukhuselwa kwesiphaluka esifutshane, ukukhuselwa kokukhupha kunye nomnye umsebenzi wokukhusela, ukuqinisekisa ngokufanelekileyo ukusetyenziswa kokusebenza.
5. Unomsebenzi wokutshekisha inyanga nenyanga, ukukhutshwa ngokuzenzekelayo kanye ngenyanga, imeko engxamisekileyo yokugcina i-120s, ukubuyisela ngokuzenzekelayo umbane oyintloko.
6. Ngomsebenzi wokuhlola wonyaka, unyaka ngamnye udluliselwe ngokuzenzekelayo ukusuka kwimeko yombane oyintloko ukuya kwimeko yomsebenzi ongxamisekileyo kunye nokukhutshwa ngokuqhubekayo, kwaye emva koko ubuyisele imeko yamandla amakhulu, ukubuyisela ngokuzenzekelayo kwimeko engundoqo.
7. Ukhuseleko oluphezulu lwesakhiwo soyilo, ukucwangciswa kwe-gasket yokutywinwa kwerabha ye-silicone yokuguga, ukufezekisa ukusebenza kakuhle kokhuseleko.
8. Ifom yokukhanya, oko kukuthi ukukhanya okuqhelekileyo kunye nokukhanya okungxamisekileyo kuboniswa kumbane oqhelekileyo, ukutshintshela ngokuzenzekelayo kwimeko yonxunguphalo, ukukhutshwa kwebhetri engxamisekileyo, ixesha likaxakeka elingekho ngaphantsi kwemizuzu engama-90.
9. Iimpawu zokukhupha iiphaneli zepaneli zineendlela ezahlukeneyo zokukhetha kuzo, zinokulungiswa ngokweemfuno zomsebenzisi.
10. Zonke i-fasteners eziveziweyo zenziwe ngensimbi engenasici.
11. Intsimbi okanye i-cable wiring ingaba.
Ngokungqinelana nemigaqo yemigaqo echaphazela imodeli yokukhetha rhoqo, kunye ne-Ex-mark kufuneka yongezwe emva kwentsingiselo yemodeli.Ithempleyithi ilandelayo: ikhowudi yemveliso imodeli implication+Ex-mark.Umzekelo, Umzekelo, Umzekelo, imfuneko izibane ukudubula-ubungqina, inani 20, imodeli imveliso: dyD-B+ Ex e ib q IIC T6 Gb +20.
Ngaphambili: dYD series Explosion-proof(LED) fluorescent isibane
Okulandelayo: I-BAD63-Uthotho lwe-Explosion-proof high performance kunye nokonga isibane se-LED
Izibane zoBungqina bokuPhuma kwiNgxaki yokuPhuma
Ubungqina boKuqhushumba kokukhanya okuNgxamisekileyo
Ubungqina bokuPhuma kwiZibane eziNgxamisekileyo
UkuKhanya okuNgxamisekileyo komlilo